Umhla My Pet » Ukuthandana online: Ukuphepha Zokuba Catfished
ukubuyekezwa: Nov. 25 2020 | < 1
Xa inkwenkwezi football Notre Dame ngayo naseManti ePuteyoli wadibana nentombi yakhe on Twitter akazange ade kukrokrelwa ukuba kuza kwenzeka ntoni. isithandwa sakhe wafa ngexesha phakathi ngexesha layo ekhatywayo, okanye ubuncinane waxelelwa oku. abafumana, eyayiphethwe catfished yi oqhelene, eshiya ePuteyoli intliziyo kunye neentloni. Kwabo wayengayazi into "catfishing" na, ngayo xa umntu online ngathi ukuba umntu ke ukuba mhlawumbi baphange imali okanye ezinye izinto amaxhoba abanyulu. e 2011, le FBI Kuqikelelwa ukuba malunga $50.4 million lahleke ukuqhatha catfishing ebalaselisa ubungnqongqo yesi sikimu.
Indlela uzikhusele ukuqhatha catfishing
Catfishing Kulula ukuchonga ngokujonga nje izinto ayibakhathazi ukuba asingqinelani. Minkarhi, ikati Fisher uya kukuxelela amabali elingaphumlisiyo musa lifane. Enye indlela kakhulu ukubona iprofayile ekhohlisayo ukubuza abahlobo ukuba uyazi ngenene umntu (xa ikati orhanelwa Umlobi kwakhona abahlobo kunye nabahlobo bakho online). Ukuba akukho bani uyazi wakha wadibana umntu kungenzeka ukuba unguye na abo bathi. Yinto iyingcamango elungileyo ukuba uziva ngathi Uyafana ikati bababambise uzakubuyela ukukhangela imbali lomntu kwaye ubone nje ukuba unako ukufumana naluphi na ulwazi kwabo.
Funda okungakumbi catfishing kwaye umonakalo sinokubanga kule mifanekiso yemfundo instantcheckmate.com.
Ukuphepha Zokuba Catfished Infographic